Sida loo basaaso Phone A Cell ee gabadhayda ?
On: Oct 07Author: adminCategories: Android, Cell Phone Spy, Tracking Cell Phone, Kormeerka Employee, Ku rakib Mobile Spy, IPhone, iPhone 5 jir Spy Software, Kormeerka Mobile Phone, Mobile Spy, Mobile Spy Online, La soco Isticmaalka Internet-, Control Parental, Spy Facebook Rasuulka, Spy For Android, Spy For iPhone, Spy iMessage, basaas Mobile smartphone, Spy on Wicitaanada, Spy on SMS, Sirdoon ee Skype, Sirdoon Viber, Spy WhatsApp, Track GPS Location No Comments
Sida loo basaaso taleefanka gacanta
Sidee baan u basaasaan karo gabadheyda ee Cell Phone?
Qof iga qoray in maalin kale weydiinaya sida ay u kormeeri karaa, gabadhooda ee telefoonka gacanta. Waxay ahayd wiil dhalinyaro ah iyo waalidka ayaa waxaa ka cabsanayaa in ay la diro iyo in ay helaan farriimaha iyo sawirada aan haboonayn. Waxaan inta badan emails aad ka walwalsan waalidiinta oo ku saabsan ilmahooda ama dhallintaada online ama "phone" welfare. Iyada oo dad badan oo aan u doodo lahaa waxa muhiimad basaasayeen carruurtooda, dhamaadka maalinta, waalidiinta sida aynu u baahan in la xakameeyo dabeecadooda oo hoos inoo yahay si loo hubiyo in ay fayo-qabka. Haddii ay tani ka mid ah isha taleefan ama fariimaha qoraalka ah, Hubaal, wax kasta oo ay heli karaan ilaa online dhex taleefannadooda, markaas waa inay.
Waxaa jira dhowr ah adeegyada online oo u oggolaan doonaa in aad si qarsoodi ah loola socdo taleefanka gacanta oo uu idin wada siiyo fog dhammaan noocyada macluumaadka telefoonka laga yaabaa in ku jira helitaanka. Sidaas wuxuu kaa badbaaadin karaa isha ku noocee ah emails ay kuu soo diraan oo ay helaan internetka taleefannadooda. Waxaad ka arki kartaa fariimaha qoraalka oo dhan iyo sms lagu kala qaado iyo helay. Xitaa waxaad ka arki kartaa sawirada iyo sawirada lagu wadaago iyo taariikhda internet fankooda.
Sida loo basaaso taleefanka gacanta – Faa'iidooyinka Monitoring Cell Software
Waxaa laga yaabaa in mid ka mid ah qaababka ugu awooda badan in noocan oo kale ah software uu leeyahay waa awooda in ay ka dhegaystaan ​​in taleefan ku nool yihiin - sida ay dhacaan. Beauty ah qaababka software aasaasiga ah sida socodka fariin qoraal ah waa in aad xataa awood u yeelan doonaan inay arkaan markii ay la tirtiray. Faa'iido kale ee software-ka waa in ay isku dhejiyaa si qoto dheer iyo si qarsoodi ah galay telefoonka smart in aysan macquul aheyn in user ay u sheegaan in ay jirto. Sidaas darteed haddii aad tahay hooyo walwalsan tahay ama aabihiis, ka walaacsan in gabadhaada waa la falayo ama in ay hesho farriimo aan habooneyn, laga yaabee in laga wiil ka weyn ama qof in qofku aanu ku kalsoonayn - noocan oo kale ah software kuu ogolaaneysaa in aad si aad u aragto runta ka danbeeya waxa socda oo aan xataa iyaga ku wargelisay in xaqiiqda ah in aad la ilaalo. Waxaa jira xitaa waa feature raadraaca halkaas oo aad ka arki kartaa meesha telefoonka ah (oo halkan ka gabadhaada) Waa mar walba in telefoonka la demin on. Sidoo kale faa'iidooyinka ku xusan software kuu ogolaanaya in aad si aad u aragto wac taariikhda, waqtiga heeganka, oo loo yaqaan iyo kuwa telefoonka ayaa loo isticmaalaa in lagu soo wac. Haddii lambarada dhigma magacyada in telefoonka ee xiriirada liiska, sidoo kale jiri doona waxaad arki karin magacyada kuwa.
Sida loo basaaso fariimaha qoraalka ah
Sida loo basaaso taleefanka gacanta – Ku xiridda Monitoring Software on Ilmahaaga Cell Phone
Waxaa jira qabsado yar, inkastoo. Waxaad u baahan tahay inaad kala soo bixi software in ay telefoonka ku jira meesha ugu horeysa awood. Hadda waalidiin badan si fudud u sheegi lahaa ilmaha in ay samaynayaan tan iyo ma noqon doonto dhibaato. Well, waxaa laga yaabaa in Doono, laakiin taasi aad xuquuqdeeda. Xaaladaha kale oo si gaar ah ula dhalinyarada ka weyn tan waxa laga yaabaa in qawl ka duwantahay oo laga yaabaa in aad rabto in aad gashato si qarsoodi ah.
Marka aad raaceen tilmaamaha app kormeeridda sii ahaan doonaa arki karo meel kasta taleefanka si aad yeelan doontaa wax fikrad ah kama haysan kartaa in aad isha ku iyada. Waxa muhiim ah in la ogaado in marka lagu weydiiyo in aad u muhiim ah liisanka, aad hore u helay doonaa marka aad kor u saxiixo oo lagu bixiyo software!
Sidaas, aad bixisay ee software-ka (Magalka links dhimis ku this page!) oo aad leedahay fure liisanka oo aad ku rakibtay app ee telefoonka bartilmaameedka. Maxaa hadda?
Sida loo basaaso taleefanka gacanta – Isticmaalka basaasnimo Cell Software si loo hubiyo in gabadhaada
Haddii aad oofiyey dhammaan tallaabooyinka kor ku xusan, hadda waxaad gali karaa meesha amaan ee gaarka loo leeyahay in ay soo saaraha idinku Arzaaqay online, isticmaalaya email iyo password bixiyo marka aad bixisay software. Waxaad heli doonaa in ay helaan dhammaan macluumaadka in maraa telefoonka (taasoo ah kulli wixii uu isla markiiba la tirtiro!).
Hadda waxaad haysataan xal u ah sida ay ula socdaan gabadhaada telefoonka gacanta oo aad ku kici doona oo ku saabsan $15.99 u app. Sida dib u eegista xad-dhaaf ah show software - tani sidoo qiimaheedu waa lacag ee nabadda ee maskaxda ama baahida loo qabo in si hoose ee arrinta trust ama dhibaato gabadha aad. Inkasta $50 muuqataa badan oo ka codsan at jaleecada hore, waxaad ka heli doontaa in software hubaashii waa online ah ugu kalsoon tahay oo aad u baahan tahay in ay ka fogaadaan goobaha lagu gaday in ay bixin doontaa software in labada uma shaqeeyo ama aad ku kici doonto gacan iyo lug ah ku qaybood billaha ah.
Arinta ku saabsan software this gaar ah waa in adeegga macaamiisha waa u fiican, iyo hababka lacag bixinta waa badan oo kala duwan. Sidoo kale, haddii aad waxa ay ogaadeen in software aan la shaqeeyo sida aad u filayeen in, waxaad ka heli kartaa celiyo buuxa la gabi ahaanba dood lahayn. Tani waa calaamad ugu kalsoon tahay online iyo qaababka in aad hesho sida qiimo yar yihiin cajiib ah. Tani waxa ay macne tahay sidii adigoo Baare shaqeeya idiin saacad. Bal qiyaas lacag sida badan in aakhirka aad ujecel lahaa! Raadi runta maanta iyo aad maskaxdaada ku nastaan, ee la soo dhaafay.
Waxaad Download karaa: Sida loo basaaso Phone A Cell ee gabadhayda ?
Sida loo basaaso taleefanka gacanta, How to spy on a cell phone for free download, How to spy on a cell phone without having it, How to spy on a cell phone without installing software, How to spy on a iphone, Sida loo basaaso fariimaha qoraalka ah, How to spy on your spouse